Hadalhayn ka dhalatay aaskii Senator Yuusuf Xaaji | Dhacdo
Hadalhayn ka dhalatay aaskii Senator Yuusuf Xaaji
Shacabka dalka Kenya ee aan Muslimka aheyn ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qaabka loo aasay senetarkii magaalada Gaarisa, Maxamed Yuusuf Xaaji oo shalay lagu aasay qubuuro ku yaalla Nairobi.
Dadka qaar waxay sheegeen inay jeclesyteen sida Muslimiinta ay meydkooda u duugaan, iyagoo aan waqti badan lumin, isla markaana aan kharash badan lagu bixin qaban-qaabada aaska sida in meydka loo qaado deegaanka uu ka soo jeedo.
Qaarkood waxa ay sheegeen inay muhiim tahay in dadka kale ee aan Muslimka aheyn ay cashar ka bartaan qaabka loo aasay Yuusuf Xaaji.
Mutula Kilonzo Junior oo ah senetar ka tirsan baarlamaanka Kenya ayaa sheegay in Yuusuf Xaaji loo aasay si xushmad leh loona baahan yahay in cashar laga barto arrintaas.
“Senetar Yuusuf si xushmad leh oo deggan ayaa loo aasay galabta, waa in aan cashar ka barannaa arrintaas, dunida waxbo lama aanan imaan, waana ka tageysaa sidaas si lamid ah-dhammaanteed wax qiimo ah ma lahan.”
Dhanka kale, baadari Kenyan ah oo la yiraahdo Pastor Nganga ayaa barta Twitter-ka soo geliyay qoraal uu kaga hadlayo aaska senetarka oo uu sheegay in uu jecleystay qaabka ay Muslimiinta dadkooda u aasaan.
“Waxaan jeceleystay tallaabada Muslimiinta ee arrintan, Senetar Yuusuf Xaaji markii uu geeriyooday waxaa lagu aasay qubuuraha Muslimiinta ee Langata isla maanta. Waxaa sidoo kale isla maanta la aasay siyaasi Nyachae oo geeriyooday labo todobaad ka hor.”
Wuxuu intaas ku daray in Muslimiinta aysan kharasha badan ku bixin aaska dadka ka dhinta.
“Ma jirto wax lacag uruurin ah, ma jirto in gaadiid muddo dheer qaadanayo la saaro meydka, ma jirto munaasabad baroor-diiq ah, ma jiro qorshe dheer oo aaska ah, wax siyaasad ah laguma soo hadal qaada goobta duugta.” ayuu ku qoray barta Twitter.
Inta badan siyaasiyiinta iyo shakhsiyaadka caanka ah ee Kenya ayaa marka ay geeriyoodaan waxaa lagu aasaa deegaanadii ay ku dhasheen.
Waxay shacabka Kenyan-ka aan Muslimka ahayn ay la yaabeen in Yuusuf Xaaji oo ahaa shakhsi caan ah lagu aaso halkii uu ku geeriyooday halkii lagu aasii lahaa deegaankii uu ku dhashay ee Gaarisa.
Maxamed Xirsi oo maareeye huteellada loo dalxiis tago ayaa boggiisa Facebook ku qoray in qaar kamid ah shacabka Kenya ay wax ka weydiiyeen qaabka loo aasay senetarka.
Wuxuu sheegay in qofka Muslimka ah inta badan lagu aaso goobta uu ku dhintay.
Aaska Maxamed Yuusuf Xaaji waxaa ka qeybgalay dad badan oo uu kamid yahay madaxweynaha Kenya, Uhuru Kenyatta iyo siyaasiyiin xilal muhiim ah haya.